के तपाईं पनि सास गनाउने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
के तपाईं पनि सास गनाउने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ४, २०७८ 36
१ ग्रीन टीःग्रीन टी पिउने गर्नुभयो भने सास गनाउन छोड्छ । यसको एन्टीब्याक्टेरियल तत्त्वले दुर्गन्ध नाश गर्छ । २ बेस्सरी पानी पिउनुस्ःपानी पिउँदा मुख ताजा रहन्छ र दाँतमा अड्केको खानेकुरा पनि पखालिएर जान्छ । यसरी मुख सफा भएर दुर्गन्ध हराउँछ ।
३ ल्वाङ र सूपःल्वाङ चुस्नुभयो भने पनि सास गनाउन छोड्छ अनि दाँत पनि दुख्दैन । सूप चपाउनुभयो भने पनि मुखको दुर्गन्ध हराउँछ । ४ कागतीको रसःीएक गिलास पानी तताउनुस् र त्यसमा दुई चम्चा कागतीको रस हाल्नुस् । अनि मनतातो भएपछि बिहान बेलुका कुल्ला गर्नुस् । केही दिनमै मुखको दुर्गन्ध हराउँछ । ५ हरियो अलैंचीःअलैंची चपाउँदा दुर्गन्ध हराउने मात्र होइन मुखको स्वाद पनि बढ्छ अनि भोक लाग्ने समस्या अन्त्य हुन्छ । gnewsnepal.com बाट सभार